August 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
August 31, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ololaha daaweynta xoolaha Puntland ayaa maanta oo Sabti ah la daahfuray. Munaasabada daahfurka ayaa waxaa ka qeybgalay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan. Ku dhawaad 3 milyan oo xoolo ah ayaa la […]
Banaanbax looga soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Kismaayo
Kismaayo-(Puntland Mirror) Boqolaal qof ayaa maanta oo Sabti ah isugu soo baxay magaalada Kismaayo iyaga oo uga soo horjeeda go’aanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in dhammaan duulimaadyada ku socda iyo kuwa ka imaanaya […]
August 29, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Kantaroolkii koonfureed ee magaalada Garoowe ayaa loo rarayaa deegaanka Laacdheeree oo kuyaala duleedka magaalada, sida uu sheegay duqa magaalada. Duqa magaalada Garoowe Axmed Siciid Muuse ayaa maanta oo Khamiis ah sheegay in rarida […]
Uganda Airlines oo duulimaadyo ka bilowday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Uganda Airlines ayaa maanta oo Khamiis ah duulimaadyo ka bilowday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xaflad loo qabtay furitaanka diyaaradda ayaa lagu qabtay garoonka waxaana ka qaybgalay masuuliyiin katirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo […]
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qeybgalay shirka iskaashiga Japan iyo Afrika oo ka furmay Tokyo
August 28, 2019 Puntland Mirror 0
Tokyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qeybgalay shirka iskaashiga Japan iyo Afrika oo maanta oo Arbaco ah ka furmay caasimada Japan ee Tokyo. Shirka oo saddexdii sannoba mar la qabto, […]
August 28, 2019 Abdi Omar Bile 0
Kampala-(Puntland Mirror) Diyaaradda Uganda ayaa shalay oo Talaado ahayd dib u bilowday adeegyadii duulimaadyada, iyada oo safar ku tagtay dalka deriska ah ee Kenya. Diyaaradda oo ay dowladdu leedahay ayaa la bilaabay sanadkii 1976 xilligii […]
Ururka Ahlu Sunna Waljamaaca oo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ka baxday heshiiskii ay la gashay
August 27, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ururka Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ka baxday heshiiskii ka dhaxeeyay, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay masuuliyiinta Ahlu Sunna maanta oo Talaado ah. Waxaa kale […]
Madaxweynaha Puntland oo u safray Itoobiya
August 26, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Isniin ah u safray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha waxaa ku sii sagootiyay ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cusmaan iyo masuuliyiin […]
Guddiga doorashooyinka Puntland oo doortay guddoomiye cusub
August 25, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa gelinkii dambe ee maanta oo Axad ah Guuleed Saalax Bare u doortay guddoomiye cusub, sida uu sheegay afhayeenka. “Guddiga doorashooyinka Puntland waxay kulankoodii ugu horeeyay ku yeesheen Garoowe caawa, […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland electoral commission late on Sunday elected Guled Salah Bare as new chairman, spokesman said. “Puntland electoral commission held their first meeting in Garowe tonight, the nine members of the commission elected Guled […]
Maxaa looga hadlay Shirka asbuuclaha ah ee Golaha Xukuumadda Puntland?
Shirkii Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo uu shir-guddoominayey Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa waxaa looga hadlay, Amniga Dalka, Shirkii Amniga Qaran, Nabadeynta Beelaha Deegaanka Cagaare, Xaaladda Bad-baadinta Doontii Caariday, Xeerka Nidaamka [...]
Labo kamid ah saddex nin oo lagu helay kufsi iyo dilka gabar 12-sanno jir ahayd oo la toogtay
Boosaaso-(Puntland Mirror) Labo kamid ah saddex nin oo lagu helay in ay kufsadeen oo ay dileen gabar 12-sanno jir ahayd ayaa subaxnimadii hore maanta oo Talaado ah lagu toogtay magaalada Boosaaso, sida uu xaqiijiyay aabaha [...]